Iwayini, izibonelelo kunye nendlela yokuyisebenzisa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Inkampani yeglasi yewayini yamkelekile kakhulu ngamaxesha ahlukeneyo. Nokuba ubhiyozela okanye wonwabele incoko emnandi, isiselo esinamandla sokuphumla kunye nezinye izibonelelo. Inzululwazi icebisa ukuba iglasi ngemini iyakwazi ukuphazamisa impilo. Yi?
1 Izibonelelo zewayini
1.1 Ikhusela impilo yentliziyo
1.2 Unokwehla ukubakho kwesifo seswekile
1.3 Ilungile ingqondo
1.4 Ixesha elide lobudlelwane
2 Kodwa unganayo iwayini yonke imihla?
Akunamhlanje sithetha ngeempawu zewayini. KumaXesha Aphakathi, iimonki zeCawa yamaKatolika basebenzise isiselo kungekuphela ukuxabisa, kodwa kunyango olwahlukeneyo. Enye irekhodi lokusetyenziswa kwayo yayilixesha lokuqhambuka kwesifo sekholera ngo-1892 kwisixeko saseHamburg (eJamani), xa iwayini yayisetyenziselwa ukubulala amanzi. Ngapha koko, iwayini inezinto ezithile ezisebenza ngokuxhasa umzimba. Jonga ukubona ukuba yeyiphi:
Ikhusela impilo yentliziyo
Ukusela iiglasi ezimbini (i-125 ml nganye) zewayini ebomvu, ewe, kunokuthintela ukuqala kweengxaki zentliziyo. Phakathi kwezifundo ezikhoyo, esinye sezifundo ezilandelelweyo ngoochwephesha babandakanye amadoda angaphezu kwama-38 angenayo imbali yesifo sentliziyo. Baye bafumana i-1 okanye 2 ye-servings yewayini ngosuku, ama-3 okanye ama-4 amaxesha ngeveki, iminyaka eyi-12. Ekupheleni kophononongo, kwafunyaniswa ukuba amavolontiya ayengaphantsi nge-32% amathuba okuba neengxaki zentliziyo xa kuthelekiswa nabantu abangakhange basele wayini. Kungenxa yokuba utywala obunxilisayo kwiwayini kuthintela ukwakhiwa kwe-LDL ('cholesterol embi', ejika ibe ngamacwecwe kwimithambo) kwaye inegalelo kwimpilo yentliziyo. Ezinye izinto ezisebenza ngokuchasene nokufumba kwamafutha kwimithambo zii-polyphenols, ezineempawu ezichaseneyo nokudumba kunye nokuphucula amandla emithambo yegazi yokuhluzwa. Yewayini!
Unokwehla ukubakho kwesifo seswekile
Kule meko, zombini iwayini ebomvu kunye nejusi yomdiliya zinoxanduva lokufumana esi sibonelelo. Zombini ziqukethe i-resveratrol, enceda ukugcina amanqanaba eswekile esegazini kwaye oko kuthintela ukugcinwa okungafanelekanga kwamafutha emzimbeni. Kukho izifundo ezininzi eziqinisekisa le mpumelelo yewayini, kodwa ungayikhuseli ngokupheleleyo. Ke ngoko, akukho mvumelwano yenzululwazi, nangona iimvavanyo zikwicala elifanelekileyo lewayini. Kubantu abanesifo seswekile sesi-2, iwayini ebomvu nomhlophe ineziphumo ezivakalayo kulawulo lweglucose.
Iwayini inokuphucula ukusebenza kwengqondo, kuba izinto zayo zithanda ukongezwa kobomi beeuron. Yiyo loo nto ikhusela ingqondo kwisifo sengqondo esixhalabisayo kwaye inciphise ukubonakala kwezifo ze-neurodeergenerative ezinje nge-Alzheimer's kunye neParkinson's. Yiloo nto uphononongo lwaseMelika olwenziwa ngabafazi lubonisa ukuba ukusetyenziswa ngokulinganayo kwewayini ebomvu kuphucula ukusebenza kwengqondo.
Ixesha elide lobudlelwane
Kwakhona i-resveratrol, kunye neepropati zayo zokulwa ne-antioxidant, ithintela ukuguga ngaphambi kwexesha. Uphononongo olwenziwe yiDyunivesithi yaseLondon lubonise ukuba ii-procyanidin, ezifumaneka kwiwayini ebomvu, zinceda ukugcina impilo yemithambo yegazi, inceda ekwandiseni ixesha lokuphila.
Kodwa unganayo iwayini yonke imihla?
Iingcali zikhusela ukusetyenziswa kwewayini, ngakumbi iwayini ebomvu eyomileyo, ngenxa yexabiso layo elisezantsi leswekile kunohlobo olugudileyo. Elinye inqaku elithanda iwayini ebomvu eyomileyo kukuba inkqubo yayo igxila kumanqanaba ee-antioxidants ekubunjweni. Ke ngoko, okufanelekileyo kukuba kudle ukuya kwiiglasi eziyi-125 ml ngosuku.
Kuba sisiselo esinxilisayo, ayizizo zonke el mundo ungayisebenzisa. Amanye amatyala:
Iswekile: Nangona isinceda ukuthintela isifo seswekile, kuyanqweneleka ukuba abantu abanesifo bakhethe iwayini eneswekile encinci.
Abantu abaneengxaki zepancreas kunye nesibindi.
Abantu abasebenzisa amayeza alawulwayo anje ngoxinzelelo, ii-anticoagulants, i-anxiolytics, njl.